Nature နဲ့ ပညာရွှေအိုးလူမခိုး -မေ၂၉-2011 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Nature နဲ့ ပညာရွှေအိုးလူမခိုး -မေ၂၉-2011
Nature နဲ့ ပညာရွှေအိုးလူမခိုး -မေ၂၉-2011
Posted by nature on May 29, 2011 in Creative Writing, Critic | 15 comments
Nature နဲ႔ ပညာေရႊအိုးလူမခိုး
ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ရေ၊ ဘုရားဟောတဲ့ လူခိုးလို့မရတဲ့ အဖိုးတန်တဲ့ ပညာဆိုတာ ဘာလဲ ? ပညာ ဆိုတာ ရွှေအိုးနဲ့တူတယ်ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ အငြ
င်းပွါးမယ်မထင်ပါဘူး၊ အတတ်ပညာကို အရင်းအနှီး ပြုပြီး ချမ်းသာတဲ့လူတွေကို လက်ညှိုးထိုးပြလို့ရပါတယ်၊ တချို့ကတော့ရွှေအိုးရှိမှ ပညာဝယ်လို့ရမယ်လို့ပြောတဲ့သူလည်း ပြောနေကြပါတယ်။
အခု MG မှာရေးတာလေးတွေကို တွေ့ပြီးစိတ်ကူးရတာနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ၊ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ဒီစကားပုံလေးကို ပေါ့ပေါ့ပဲ သဘောထားခဲ့ပါတယ်၊ အခုစဉ်းစားမိတာက လူခိုးလို့ မရတဲ့ ပညာဆိုတာ ဘာလည်းလို့-
ဥပမာ-ရွှေလုပ်နည်းလို အဖိုးအရမ်းတန်တဲ့ ပညာတခုရထားပြီဆိုပါစို့၊ ဒီပညာကို လူခိုးလို့ မရဘူးလား၊ တကယ့်ကို မီလီယံဘစ်ဇနစ် ဖြစ်လို့ လူတိုင်းက အနုနည်း အကြမ်းနည်း တွေနဲ့ တရားတဲ့နည်းရော မတရားတဲ့နည်းရော နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ရယူဖို့ကြိုးပမ်းကြမှာ မလွဲပါဘူး၊ ဖမ်းဆီးပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မေးရင်လဲ ခိုးလို့ရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ လူခိုးလို့မရတဲ့ပညာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပထမအရွယ်မှာ ပညာရှာ၊ ဒုတိယအရွယ်မှာ ဥစ္စာရှာ၊ တတိယအရွယ်မှာ တရားရှာ ဆိုတဲ့စကားမှာ ပါတဲ့ ပညာဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာလည်း။
ပညာရွှေအိုးဆိုတာကို လက်ခံပေမဲ့ လူမခိုးဆိုတဲ့ အပိုင်း နားလည်ရခက်ပါတယ်၊ မိမိတို့ရဲ့အမြင်ကို ဆွေးနွေးကြဘို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အားလုံး ဗဟုသုတ တိုးပွါးမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဆိုပါစို့ .. အဲဒီပညာကို ၁၅ နှစ် သင်ခဲ့ရတယ် … သူ့မှာ မွေးပါရာ ပါရမီလည်းပါတယ် … အဲဒီလိုမျိုးပညာကို သူများတွေကို ရော့ အင့် ဆိုပြီး ပေးလို့မရဘူး … သူ့ဆီကနေ ခိုးယူလို့လည်း မရဘူး …
ဖော်မြူလာတစ်ခုကို သူများကခိုးယူလို့ ရနိုင်ပေမယ့် ဦးနှောက်ကိုတော့ ခိုးယူလို့မရဘူးတဲ့ သဘောပါ …
ဒီခေတ်မှာတော့… အတတ်ပညာကို .. ငွေကောင်းကောင်းပေးပြီး.. ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့သင်ယူလို့ရပါပြီ..။ ငွေအပေးကောင်းလေ အတတ်ပညာကောင်းရလေပါပဲ..။
… ကျောင်းစရိပ်တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်သလောက်.. ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ ..သင်လို့ရသပေါ့…။
ပညာတွေသင်..အတတ်စွမ်းတွေတတ်တော့ ဘာလုပ်မလဲ…။ ငွေ(ဥစ္စာ)ရှာရတာပါပဲ..။
အဲဒီပြန်ရမဲ့ငွေဟာ.. ပညာရေးမှာ ရင်းနှီးမြုတ်နှံလိုက်တဲ့ ငွေထက်အများကြီး ပိုရ ရပါမယ်..။
ဒါမှ… အတတ်ပညာကောင်း.. ပရောဖက်ရှင်နယ်…လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့နော…။
အသိသညာကတော့… နည်းနည်း နားလည်ရခက်မှာပါ..။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့..အတတ်ပညာ.. အတွေ့အကြုံ.. သဘာ..ပါရမီတွေနဲ့ပေါင်းပြီး.. ဖေါ်ထုတ်ယူရတာပါ…။
ဒါမျိုးဆို… သူတပါးက ခိုးယူလို့မရနိုင်ပေမဲ့.. ကိုယ့်လို တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်အောင်… တခြားသူကို ပေးလို့ရပါတယ်..။ သင်ပေးလို့ရနိုင်သပေါ့…။
သိပ်မကြာတော့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ.. အတတ်ပညာကို… ခေါင်းထဲရိုက်ထည့်သလို… ပွားယူနိုင်လိမ့်မယ် ထင်မိပါတယ်..။
ဒါကတော့… ဆက်တွေးနိုင်အောင်..အစ, ချပေးထားတာပါ..။
တတ်သိပညာ မနေသာ.. ပညာတိုင်း သင်ချင်တိုင်း မတတ်ပါ။
ပိုက်ဆံရှိလို့ ပညာရှင်သာ ခေါ်ခိုင်းလို့ရချင် ရမယ်။
ပညာရှင်တော့ လူတိုင်း မဖြစ်နိုင်ပါ။
အိုင်းစတိုင်း ကိုတော့ လူတိုင်း သိမှာပေါ့.. သူထွင်သွားတဲ့ ဖောမြူလာတိုင်း အကုန် သင်ပြီး လေ့လာလိုက်ယုံနဲ့ ဒုတိယ အိုင်းစတိုင်း (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ပွား အိုင်းစတိုင်း ဖြစ်မသွားပါဘူး။
သူရဲ့ ပညာတွေကို လိုက်သင်နေတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ။ လူတိုင်း မဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ပညာရွှေအိုး လူမခိုး ပါရှင်။
သဘာဝကျကျပဲ တွေးကြရအောင် …
အတတ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ် အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ထိုင်ထဲနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး … သူငယ်တန်းအဆင့်ကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်း သင်ယူလာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် … ငွေပေးတိုင်း သင်လို့မရတာတွေ အများကြီးရှိပါတယ် … အတတ်ပညာတစ်ခုကို ဆရာတစ်ဦးထဲဆီမှာ တပည့်တွေအများကြီးအတူသင်ပေမယ့်လည်း အကုန်လုံး အတူတူတက်မြောက်ကြတာမှမဟုတ်တာ … စိတ်ဝင်စားမှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအပြင် အသိဉာဏ်ကလဲ လိုအပ်ပါသေးတယ် …
အတတ်ပညာဆိုတာကတော့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်တစ်ခုခု … သူကြီးပြောသလို ငွေများများပေးပြီးသင်ထားရပြီး ပိုက်ဆံပြန်ရှာတော့ နဲနဲပဲပြန်ရရင်တော့ မကိုက်ဘူးပေါ့ … ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့နိုင်ငံမှာ ပညာသင်စရိတ် အလွန်နဲပါတယ် … အရည်အသွေး မကောင်းဘူး သေချာတတ်အောင် မသင်ဖူး စသဖြင့် အမျိုးမျိုးပြောကြပေမယ့် တကယ်ကြိုးစားသင်ယူရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါသေးတယ် …. (သာမန်ထက်တော့ ပိုကြိုးစားရမှာပေါ့) ..
အသိပညာကတော့ စိတ်ဓါတ်နဲ့အတွေးအခေါ်ပိုင်း အဓိကကျပါတယ် …. အသိခေါင်ခက် အဝင်နက်တဲ့သူတွေ များနေသေးသရွေ့ အသိပညာရှင်တွေ နဲသထက်နဲနေအုန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် ….
ဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အတတ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ် အသိပညာပဲဖြစ်ဖြစ် ရနိုင်သလောက် ကြိုးစားသင်ယူကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် … မည်သည့်ခောတ် စနစ်ကိုမှ အပြစ်တင်မနေပဲ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ်ကြိုးစားချင်လာအောင်၊ လူကြီးများကလဲ လူငယ်များကို ကြိုးစားသင်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းများကို ရှာဖွေပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် … ပညာ၏အရေးပါပုံ ဆောင်းပါးများကိုလည်း များများရေးသားကြစေချင်ပါတယ် …
ကိုယ်သိသလောက် ပြောရရင် “ပညာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုးဆိုတော့ အယူအဆ ၊ ခံယူချက်လည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
အခုခေတ်အခါ မှာ ပညာလို့ပြောလိုက်ရင် အတန်းပညာကို
လူအများစုက ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ကျောင်းမနေတဲ့သူ ဆိုရင် ပညာမတတ်တဲ့ သူပေါ့။ ဘွဲ့တွေအများကြီး ယူထားရင် ပညာတတ် လို့ ယေဘူယျ သတ်မှတ် လေ့ရှိတယ်။
ဒါဆိုဥပမာလေး တခုပြောကြည့်မယ်။ အတိအကျပြောရရင် ကိုယ့်ဦးလေးပါ။ အခုတော့ ဆုံးသွားပါပြီ။ ကိုလိုနီခေတ်ကုန်ခါနီး မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ စာသင်ဖူးပါတယ်။ နောက်တော့ ရန်ကုန်က သူဠေးတစ်ယောက် ရဲ့ စက်ရုံမှာ ရိုးရိုးသာမန် အလုပ်သမား ဝင်လုပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ဂျပန် သံရည်ကြိုစက်ရုံ ကိုပညာတော်သင် စေလွှတ်ခံရတယ်။
အတန်းပညာတော့မလိုဘူး ဒါပေမဲ့ ဂျပန်စာကိုတော့ သင်ရတယ်။ ဂျပန်စက်ရုံ မှာလည်း အလုပ်သမား အဆင့်နဲ့ နေခဲ့ရတာပါ။ ၄ နှစ်လောက်နေတော့ မြန်မာပြည်
ပြန်ရောက်လာပြီး သူ့ဆရာဆီမှာ အလုပ်ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ နောက် အဒေါ်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ Mandalay မှာ အခြေချ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထောင်တယ်။ ကားစလစ်တွေ လုပ်တယ်။သူ ဆုံးတော့ အဒေါ့်မောင် (အခုကိုယ့်ဦးလေးက) ဆက်ခံတယ်။ နှစ် ၄ဝ ကျော်ပါပြီ။ အစိုးရစက်ရုံတွေက မလုပ်နိုင်တဲ့ စလစ်ကြီး တွေ ကိုယ့်ဦးလေးစက်ရုံမှာ လာအပ်ပါတယ်။ အခုဦးလေးက ရိုးရိုး စာပေးစာယူနဲ့ ဘွဲ့ရတာပါ။ သူ့ဘွဲ့ နဲ့မဆိုင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ပြီး ကြီးပွားနေတာပါ။ ဒီလို လူတွေအတွက်ကြတော့ “ပညာ” ဆိုတာ အတန်းစာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ယောက်က လက်သမားဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ အတန်းပညာကို မူလတန်းတောင် မပြီးခဲ့ပါဘူး။ သူ့လက်ရာ ကတော့ ပြောမယုံကြုံ ဖူးမှသိပါ။ ဘဝကို သုညကစပြီး အခုအချိန်ခါမှာ တပည့်တပန်းတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတာပါ။ သူ့တပည့်တွေတောင် သူ့လက်ရာကို မှီတဲ့သူ
ရှားပါတယ်။ အခုသူ့လုပ်ငန်းကို သူ့သမီး ဦးစီးနေတာပါ။ သူလိုလူအတွက် လည်း “ပညာ”ဆိုတာ ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ယောက်က အားလုံးသိတဲ့ ပန်းချီဆရာမင်းဝေအောင်ပါ။ အလယ်တန်းထိပဲ ပညာသင်ဘူးတယ်။ တဲလေးထဲမှာနေပြီး စားစရာ ထမင်းမရှိလို့ ကန်ဇွန်းဥကို စားပြီး ကြွတ်ကြွတ် အိပ်နဲ့ အညစ်အကြေးစွန့် ခဲ့ရတယ်။ အခု သူ့ပန်းချီကားတွေက နိုင်ငံတကာ မှာ တန်းဝင်နေပြီ။ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် သူ့ပန်းချီကားတွေ ကို ဈေးကြီးပေး ဝယ်ရတယ်။ သူလိုလူအတွက်
လည်း “ပညာ” ဆိုတာ အတန်းစာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ယောက်က ကိုယ်တို့ Mandalay က အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင်က ဦးအောင်အောင်ပါ။
ရွှေတောမှာ ကွမ်းယာရောင်းပြီး ရွှေလှော်ဖို လုပ်ရာကနေ ချမ်းသာလာတာပါ။ အခုမြန်မာပြည် တပြည်လုံးက ရွှေပညာ သင်ကြားချင်သူတွေကို တလတခါ အခမဲ့ သင်ကြားပေးနေတာပါ။ သူ့အတွက်လည်း “ပညာ” ဆိုတာ အတန်းစာ မဟုတ်ပါဘူး။
နောက် ဒီနေ့ခတ်မှာ နာမည်အကြီးဆုံး လူကြိုက် အများဆုံး social network Facebook ရဲ့ ဖန်တီးရှင် ကလည်း ဟားဗတ်ကျောင်း ကနေ တဝက်တပျက်နဲ့ ထွက်ခဲ့တာပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ဖခင်ကြီး ဘီလ်ဂိတ်လည်း ဒီကျောင်းကနေ တဝက်တပျက်နဲ့ ထွက်ခဲ့တာပါ။ (အခုတော့ ဘီလ်ဂိတ် ကို အသက် ၅ဝ ကျော်မှ ဟားဗတ်က ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့် ခဲ့ပါတယ်။)
ဆိုလိုချင်တာက ဘွဲ့ရသည် ဖြစ်စေ မရသည် ဖြစ်စေ ပညာတတ်တယ် မတတ်ဘူး လို့ပြောလို့မရပါဘူး။
ပညာ ဆိုတာ အသိ + အမြင် + အကြား + ကြိုးစားအားထုတ်မှု + ပင်ကိုုယ်ပါရမီဉာဏ် + စာပေဗဟုသုတ ရယ် ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။
ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လည်း စာပေဗဟုသုတ(လူတယောက်ရဲ့အသက် ကို ကယ်ဖို့ အခြေခံနည်းလမ်းတွေ) ကိုဆေး ကျောင်းကသင်ပေးပါတယ်။ ဆရာဝန် စစ်စစ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ကတော့ မိမိကိုယ်တိုင် ရဲ့ အသိ၊ အမြင်၊ အကြား၊ ဝါသနာ၊ ပင်ကိုယ်ပါရမီဉာဏ် နဲ့ ကြိုးစားအား ထုတ် ရပါတယ်။
ပညာရွှေအိုးလူမခိုးတဲ့။ (ရွှေအိုးဆိုရင် ခိုးလို့ရပါတယ်) ပညာ ရွှေအိုးဆိုတာ တင်စားတာပါ။ အဲဒီပညာကို ခိုးလို့ ရလို့ ခိုးတယ်ဆိုရင်တောင် ခဏပါပဲ။ ရေရှည် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ မြတ်စွာဘုရားကတောင် လောကမှာ ပညာနဲ့ အသက်မွေးမှု သည်သာ အမြတ်ဆုံးလို့ ဟောခဲ့ တာပါ။
ပညာရဲ့ အနက်က ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ကိုယ်သိသလောက် ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကိုပြောပြတာပါ။
ခိုးယူလို့ရတဲ့ နည်းပညာတွေက စာရွက်စာတမ်း ကွန်ပျူတာတွေ ပေါ်ကမှတ်တမ်းတွေပါ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲက ထွက်လာတဲ့ အသိဉာဏ်ပညာစစ်စစ်ဆိုရင်တော့ မှတ်တမ်းတွေခိုးသွားလည်း သူပြန်စဉ်းစားရင် ပေါ်လာရမှာပေါ့။
ပညာ ဆိုတာ.. အကောင်းအဆိုး.အကြောင်းအကျိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သောဉာဏ် လို့သိထားခဲ့ဖူးပါတယ်..
ဒါကြောင့်.. လောကီ လောကုတ်.. ဘယ်နေရာမှာ မဆို ပညာဉာဏ်သာရှိနေခဲ့ရင်.. အကျိုးစီးပွား ဖြစ်စေတာမို့.. ရွှေအိုး…
ထို အကောင်းအဆိုး.. အကြောင်းအကျိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်း. (ပညာ) သည်.. မိမိပြုလုပ်သော ကာယကံ.. ဝစီကံ.. မနောကံ များမို့ (ထိုကံများကို များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်မို့).. မိမိနှင့်သာ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါသည်..
ထိုထို ပညာနှင့် ယှဉ်သော မိမိပြုသော ကံများသည် လက်ရှိပစ္စက္ခ ဘဝ၌သာ မက.. နောင်သံသရာနှင့်ပါ သက်ဆိုင်သော အရာများ ဖြစ်သောကြောင့်.. မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မျှ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ…
ထို့ကြောင့် မည်သူမှ ခိုးယူခြင်း မပြုနိုင်ပါ…ဟုထင်ပါသည်။
ထို့ပြင် .. အသိပညာ.. အတတ်ပညာ ဟုရှိထားရာတွင်လည်း..
လူတို့သည် မိမိပြုမူဆောင်ရွက်သမျှ.. လောကကို ရှုမြင်သမျှ.. တွင်..
မိမိ၏ အသိပညာနှင့် အတတ်ပညာတို့ ပေါ်တွင် အခြေခံကြသောကြောင့်..
ပညာ၏ အနိမ့်အမြင့်.. အသိပညာ အတတ်ပညာတို့၏ မှန်ကန်မှု မှားယွင်းမှု.. အသုံးချနိုင်မှုပေါ်တွင်
ဘဝအဓိပ္ပါယ်.. ဘဝရပ်တည်မှု.. တို့ကို ကွဲပြားစေသောကြောင့်..
ကံ ကံ၏ အကျိုးတို့ မတူညီနိုင်ကြတော့ပါ..
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အဆုံးအမ အရ.. ကံသာလျှင် မိမိ ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်ပါသောကြောင့်…
nature ၏ကံသည် nature နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသဖြင့်.. မည်သူနှင့်မှ မသက်ဆိုင်ပါသောကြောင့်.. မည်သူမှ ခိုးယူ၍ မရနိုင်ပါဟု သုံးသပ်မိပါကြောင်း…
ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေလေးပဲ phyoshein ရေ၊ကျနော်ရေးမဲ့ အဖြေထက် ပိုမိုပြည့်စုံနေတာ တွေ့ရလို့လေးစားပါတယ်၊ ကျနော်နဲ့အယူအချင်းထပ်တူပ်ပါပဲ၊ ကျနော်ကမေးတဲ့သူဖြစ်နေလို့ phyoshein ကိုမှန်ပါတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားစွာရေးသားထားတွေဟာလည်း တော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ အားလုံးဟာကိုယ့်ဘဝအတွေ့အကြုံ အရတော့ ကိုယ်အမြင်ဟာကိုယ့်အတွက်တော့အမှန်တွေချည်းပါပဲ၊ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မူရင်းစာရေးသူ မည်သို့မည်ပုံလုပ်လိုက်သည်မသိ.. phyoshein မန်းသောစာသည် #
This solution has been deemed correct by the post author ..ဖြစ်သွားလေသတည်း..။
အတတ်ပညာ ရယ်..။ အသိသညာ..ရယ်လို့ကျုပ်ရေးထားတာ သတိထားမိကြပါစေနော…။
သညာဆိုတာ… မှတ်သားနိုင်မှုပါ..။ အသိနဲ့တွဲပြီးရေးထားပါတယ်..။
Inventors: Loos; Hendricus G. (3019 Cresta Wy., Laguna Beach, CA 92651)
Appl. No.: 961907
Current U.S. Class: 600/28
Intern’l Class: A61B 005/00
Field of Search: 600/26-28 128/897,898
“ပညာ” isaknowledge ( what to do & how to do ).
If you know how to driveacar ( It’s your knowledge ) &
Then, nobody can steal/remove this knowledge from you.
You will not forget how to drive the car for the rest of your life &
Let say, you can make your career as car driver.
sorry ပဲသူကြီးရေ၊ ညကကွန်ပြူတာဖွင့်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတာ တရေးနိူးတော့သန်းကောင်ကျော်နေပြီ၊ ကွနြ်ပူတာကို ပိတ်ခါနီး MG ကို update လုပ်လိုက်တာ comment တွေတက်လာတာတွေ့တာနဲ့ မန့်ချင်ဇောနဲ့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မန့်လိုက်လို့ သီးခံပါသူကြီးရေ။ ကျနော်ကတော့ Phyo Shein ရေးတာကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ကုသိုလ်တရားများသည် ကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်သောအမှန်တရားများဖြစ်ပြီး အကုသိုလ်တရားများသည် ဆိုးကျိုးကိုပေးတတ်သော အမှားတရားများဖြစ်သည်ဟု ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်တရားများ ကိုလေးလေးနက်နက် မှန်ကန်စွာခွဲခြားသိမြင်ပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဆောင်ခြင်း ရှောင်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟုယူဆပါသည်။
အများစုကတော့ ပညာဆိုတာကတော့ ဥစ္စာကိုတိုက်ရိုက်ရှာဖွေနိုင်တဲ့နည်းပညာလို့ယူဆကြပါတယ်။
ကျနော်ရဲ့အမြင်ကတော့ ပညာဆိုတာ ဥစ္စာကိုရှာဖွေတဲ့ နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ ထားရမဲ့မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ခြင်းစာတရား ၊ စိတ်ကောင်းစေတနာ၊ တွေကိုထား ရှိခြင်းဟာ ကုသိုလ်တရားများကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်လို့ ကြီးပွားတိုးတက်စေတယ်လို့ မြင်တဲ့အမြင်ဟာ ပညာရှိတဲ့သူတွေ ရဲ့အမြင်လို့ယူဆပါတယ်၊ အဲဒီအမြင်ကို သူခိုးကခိုးသွားလို့ ကိုယ့်ဆီကပျောက်သွားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ အားလုံးပဲ ပညာရှိတွေဖြစ်ကြပါစေ။
ရောစပ်ပြီး မလယ်မရှုပ်နဲ့ ကိုယ့်အာဘော်တော်တော်လုပ်ခြင်ကြတာဘဲ
အစာရေစာ ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် သေလုမျောပါးဖြစ်လတ္တံ့သောခါ
အသက်ရှင်ခြင်းကို ပညာတွေ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေနဲ့
ပညာရှိကြီး မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ရဲ့
ဟမ်ဘာဂါနဲ့ ဂျော်နီဝါကားလေးတော့ တွဲပြီးသုံးစောင်ရင်
လောကီပညာနဲ့ လောကုတ္တရာ ပညာကတော့ဖြင့် မနှိုင်းယှဉ်အပ်ကြောင်းပါ..
သို့သော်လည်း.. ပညာ ဟုဆိုရာတွင်..
အကယ်၍များ ကိုဂျော်နီ အနေနဲ့ သင့်မြတ်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများ ရှိခဲ့ပါက..
စားစရာ.. သတ္တဝါတစ်ကောင်များ အဲဒီလို အခြေအနေမှာ ရောက်လာခဲ့ရင်..
သူတစ်ပါး အသတ်တော့ဖြင့် ရန်မရှာလိုဘူး..ဆိုရင်တော့ မသတ်နဲ့ပေါ့..
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း… လောကီနဲ့ လောကုတ္တရာ အသိ ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး.. သူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးနဲ့
သူဌေးသမီးတစ်ယောက်က .. အသတ်ခံရတော့မယ့် ခိုးသူတစ်ယောက်ကို မင်းမှုထမ်းများထံမှာ..
သူဌေးသမီးက သူ့ကို ချစ်ခင်ကြင်နာပေမယ့်..သူခိုးကတော့ စာရိတ္တမကောင်းရှာပါဘူး..
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့.. တောင်ပေါ်တစ်ခုကို တက်တုန်း.. သူဌေးသမီးကို သူ့ယောက်ျား ခိုးသူ က ဥစ္စာပစ္စည်းများရရန်.. အသက်ရန်ရှာသတဲ့..
ဒါနဲ့ပဲ.. အဲဒီသူဌေးသမီးက. နေပါဦး မောင်မောင်ရယ်ပေါ့.. ကန်တော့ပါရစေ ဆိုပြီး..
သူယောက်ျားကို ချောက်ထဲတွန်းချပြီး.. သေစေခဲ့ပါတယ်..
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် ဟာ.. လူသတ်ရာရောက်ခဲ့ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်.. ဘုရားရှင်က အဲဒီသဌေးသမီးကို ဉာဏ်ပညာနဲ့ ပြည့်စုံသူလို့ ဆိုပါတယ်…
ဒါကြောင့်…. အများ အတွက်သော်လည်းကောင်း.. ကိုယ့်အတွက်သော်လည်းကောင်း.. ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့..
မည်သို့မည်ပုံ ကျူးလွန်တာနဲ့.. မည်သည့်စိတ်ထားနဲ့ ကျူးလွန်တယ်ဆိုတာဟာလည်း…သူ့ရဲ့…
အတတ်ပညာ.. အသိသညာ နဲ့ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း.. သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း.. သက်ဆိုင်မှုတော့ဖြင့် ရှိတာပါပဲ.. ဒါက ကျွန်တော့ အသိအရပါ..
ကိစ္စတစ်ခုမှာ ကောက်ချက်ချဖို့ လိုတာကြောင့်..
ပိုမိုသင့်မြတ်သော ချဉ်းကပ်မှု.. အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုကို အမှန်တစ်ကယ်ပင် လိုအပ်ပါကြောင်း..